Basic Video Editing with Adobe Premiere Pro ( မြန်မာလို ) | Ladyoak
Basic Video Editing with Adobe Premiere Pro ( မြန်မာလို )
သင်ရင်းလှူ Donation Bundle Vol.1
( 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗰 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗔𝗱𝗼𝗯𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗿𝗼 )
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ Stay At Home ကာလမှာ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ သင်ခန်းစာတွေသင်ရင်း လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအလှူပေးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီသင်တန်းလေးကတော့ Adobe Premiere Pro Software နဲ့ Video Editing ကို လုပ်တတ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်ကဘယ်လိုစရမှာလည်း အခက်အခဲဖြစ်နေသူများနဲ့ English စကားပြော Tutorial တွေကြည့်လို့အဆင်မပြေသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ကာလမှာ အိမ်မှာပဲလုံခြုံအောင်နေကြရင်းနဲ့ Video Editing ကိုလေ့လာပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးလို့ရသလို အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ ကိုယ်ပိုင် Content တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေဖို့ အတွက်လည်း သင်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် Video Editing ကို စပြီးလေ့လာခဲ့တာရော Digital Marketing Company မှာအလုပ်လုပ်ရင်းရတဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေ ပါ ပေါင်းရင်3years Experience ရှိပါတယ်။ ဒီ Bundle လေးထဲမှာ သင်ခန်းစာတွေခွဲပြီး မြန်မာလိုရှင်းပြပေးထားတာကြောင့် နားလည်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
YouTube မှ Free Video များ မပါဝင်ပါဘူး။ Lifetime Video Lesson တွေပါ။
ဒီသင်ခန်းစာတွေက Pre Recorded Video များဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ရတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ရင်းလိုက်လုပ်လို့ရသလို Video Quality ကလည်း 1080p Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေပြေလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Adobe Premiere Pro Software ကိုအသုံးပြုပြီး Video Editing လုပ်နည်းကို Basic Level ပြီးတဲ့အထိသင်ယူလို့ရအောင် စီစဉ်ထားတာကြောင့် Beginner to Advanced လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ Tips and Tricks တစ်ချို့လည်းပါပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် Bonus အနေနဲ့ Motion Array ဆိုတဲ့ Premiere Pro Preset တွေ Template တွေ ရှိတဲ့ Website မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ Premium Account နဲ့ Download လုပ်ထားတဲ့ Asset တစ်ချို့ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲
– Getting Started with Free Resources
– Useful Video Editing Tips
𝗕𝗮𝘀𝗶𝗰 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀
– Organizing, Layouts and Importing Media
– Project Panels and Sequence
– Timeline and Trimming Footages
– Cutting Videos on Timeline
– Sequence Error Solving
– Changing Sequence and Adding Audio
– Video and Audio Transitions
– Adding Texts, Animation using Keyframes
– 300 Color Correction Pack
– Distortion Zoom Transitions
– Fashion Color Presets
– PB Motion Graphics for Premiere
– Typography Slides
– VHS Presets
စတာတွေပါဝင်ပြီးတော့ မြန်မာငွေ ၂၀၀၀၀ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
70% ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလှူဒါန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ 30% ကိုနှောက်ထပ် သင်ရင်းလှူအစီအစဉ်တွေဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေအဖြစ်အသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ 🙆🏻‍♂️✨
လက်ခံတဲ့ Payment Method တွေကတော့ Kpay / KBZ Mobile Banking / AYA Pay / AYA Mobile Banking တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ https://www.facebook.com/chaxnsee/ မှာလာပြောပေးပါခင်ဗျာ အားလုံးပဲ Stay Safe ကျပါ We Must Win ❤️💪🏻
#AdobePremierePro #VideoEditing #Tutorial
Source: via Enchax Creative on Ladyoak
Simple Text Border Animation – Premiere P ...
How to Darken Video in Adobe Premiere Pro? (mak ...
Simple Clean Masked Text Reveal in Premiere Pro
How to RETOUCH Skin inaVideo (Premiere Pro Ne ...
Video Inside Text in Premiere Pro CC 2019 (Tuto ...
Tutorial – Adobe Premiere Pro 2021 FREE F ...
Zoom Through Text Intro or Zoom Transition in P ...
Shake Effect Automatically in Adobe Premiere Pr ...
Premiere Pro CC : How to Fade In Text
TurnaVideo Black and White in Premiere Pro! B ...
Fly in 3D Newspapers from CRUELLA (After Effect ...
5 More DOPE Premiere Pro Hacks
HAND-WRITTEN TITLE ANIMATION EFFECT // Premier ...
STOP Keyframing to Zoom In & Out in Premier ...